မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: March 2009
ဥာဏ်မီသလောက်တွေးတောမိခြင်း upon Meaningful Wedding
အရှင် ဦးကုမာရ(ကျမအခေါ် ဘုန်းဘုန်းဦးကု) ရဲ့ ပီနန်ဆရာတော်ဘုရားကြီး သီရိလင်္ကာခရီးစဉ်အတွင်း ဖွင့်ဆိုရှင်းပြတော်မူတဲ့ နိဗ္ဗာန်အယူအဆကို မှီငြမ်းပြုရေးသားပူဇော်ထားတဲ့ Meaningful wedding က ဘုရားအလိုတော်ကျ ချစ်တဲ့သူနဲ့ ပေါင်း ကြတဲ့ (နိဗ္ဗာန်) ပွဲများ ဟုတ်မဟုတ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဥာဏ်မီသလောက်တွေးတောမိခြင်းပါ။ မူရင်းပို့စ်က ဒီမှာ ဖတ်ပါ။ ဘုန်းဘုန်းဦးကု ဘုရား ပြန်လည်လျှောက်ထားခွင့်ပေးပါ… မိရိုးဖလာလွန်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဲ့သို့ ဥာဏ်သုံးပြီး နားလည်သဘောပေါက်တဲ့ထဲမပါပေမဲ့ စဥ်းစားစရာပါပဲ ဘုရား။ ဒါပေသိ တပည့်တော် တစ်ခု ဆက်စဉ်းစားတာမိတာက တိုက်ရိုက်အနက်ကို ကန့်သတ်ထားရင် ဆန့်ကျင်အနက်ကို ခွင့်ပြုတယ်ပဲထားပါဦး.. တပည့်တော် နာဖူးတဲ့တရားထဲက မှတ်မိသလောက်က ဖြူတာလဲ အကုသိုလ် မည်းတာလဲ အကုသိုလ်..ဒါဆို ခန္ဓာငါးပါးသည်လဲ ဒုက္ခ..ချစ်တဲ့သူနဲ့မပေါင်းရ ရင်လည်းဒုက္ခသည် တိုက်ရိုက်အနက် ခန္ဓာငါးပါးမရှိခြင်းသည်သာ ချမ်းသာခြင်း (နိဗ္ဗာန်) မည်သည် မဟုတ် ချစ်သူနဲ့ပေါင်းရခြင်း အတူနေရခြင်း မင်္ဂလာဆောင်ရခြင်း သည်လည်း ချမ်းသာခြင်း သုခ (နိဗ္ဗာန်)လို့ ဆိုနိုင်ပါရဲ့လား သမုဒယသစ္စာ- ဆင်းရဲကြောင်းအမှန်မလို့ ဒုက္ခသစ္စာ-ဆင်းရဲ့ကျိုးတွေဖြစ်လာတယ် ချစ်သူနဲ့ပေါင်းရခြင်း အတူနေရခြင်း မင်္ဂလာဆောင်ရခြင်း သည်လည်း ဆင်းရဲကြောင်းအမှန်ဖြစ်နေရင် ဒုက္ခသစ္စာတွေ ဆက်ဖြစ်လာဦးမယ်..ပြောမယ်ဆိုရင် ဘ၀..ဘ၀တွေကို သံသရာဆက်နေစေတယ် ဒီဘ၀ ဒီခန္ဒာဝန်ကြီးလေးနေသ၍ ကိလေသာတွေမဖြတ်နိုင်သေးသ၍ ဒီခန္ဒာငါးပါး ၀ဋ်ဆင်းရဲကြီးက လွတ်မြောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ တပည့်တော်မထင်မိဘူး ဘုရား။ နောက်ထပ် တပည့်တော်မ ငယ်ငယ်က ကျောက်ဆည်မြို့ ကျောက်သဘောင်္ဂိုဏ်းခေါ်မလားပဲ ဆရာတော်တစ်ပါးဟောဖူးတာကို မှတ်မိသေးတယ် နေပူထဲသွားရင် ဆင်းရဲတယ် နေရိပ်ထဲကသစ်ပင်အောက်လဲရောက်ရော အေးချမ်းသွားတယ်ဆိုရင် အဲဒါနိဗ္ဗာန်ပဲမဟုတ်လားတဲ့ တပည့်တော် စဉ်းစားမိသလောက်ကတော့ တခဏနိဗ္ဗာန်(တခဏချမ်းသာခြင်း)ဆိုရင်တော့ မှန်တယ်ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ တကယ်လို့သာ အကြင်သူသည် နေပူထဲသာပြန်ထွက်ရမယ်ဆိုရင် တဖန်ပြန်လည် ဆင်းရဲဦးမယ် မဟုတ်ပါလားလေ။ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်ဘုရားကတော့ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသည် တခဏနိဗ္ဗာန်ကို ရည်ရွယ်ရင်းမဟုတ်ပဲ ဆင်းရဲတို့၏ကင်းရာကုန်ရာအမှန်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားများကိုသာ ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်လို့ ဘုရားအလိုတော်ကျ ချစ်တဲ့သူနဲ့ ပေါင်း ကြတဲ့ (နိဗ္ဗာန်) ပွဲများလို့ တင်စားမယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်ဘ၀င်မကျမိသလိုပါပဲဘုရား။ စာကြွင်း။ ။ဘုန်းဘုန်းဦးကုရဲ့ ဒီပို့စ်နဲ့ တပည့်တော်ရဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို ဘုန်းဘုန်းဦးကောဆီတော့ မေးမြန်းလျှောက်တင်ချင်ပါသေးတယ်ဘုရား။
ဘလော့ဂါလည်းလူသားပါပဲ.. တခါတလေကျတော့လည်း သာမန်အချိန်မှာ သာမန်လူတစ်ယောက်က စတာနောက်တာ အပြောင်အပြက်ပြောတာခံရတော့ ပျော်ကြသတဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်က အဲလို လုပ်တော့ကျမှပဲ …ဘလိုင်းကြီးလာခွတ်သွားတယ်..ဒါကြောင့် ဘလော့ဂါတွေစောက်ချိုးမပြေဘူးလို့ပြောတာ ဆိုသလိုမျိုးလဲ အပြောခံရလားခံရပါရဲ့.. အော်…အသင်လောက ဘလော့ဂါလည်း လူသားပါပဲဗျလို့ ပြောပါရစေဦး တချို့မီဒီယာသမားတွေ ဂျာနယ်လစ်တွေကလဲ ဘလော့ဂါတွေနဲ့ တွေ့ရမေးရမြန်းရမှာ ကြောက်သေးသတဲ့။ ဘာဖြစ်လို့ဆို မတော်ရင်မတော်သလို မထင်ရင်မထင်သလို ပြန်ဆော်တာ ဆဲတာ ခံရမစိုးသတဲ့…အမည်မသိတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတစ်မျိုးလို့တောင် တင်စားလိုက်သေးရဲ့ တချို့တချို့ ဘလော့ဂါမျက်မုန်းကျိုးသမားတွေကတော့ ပြောပြန်တယ်။ ဘလော့ဂါတွေဆိုတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ ကိုယ်ရည်သွေးတာတွေများ၊ စကားများရန်ဖြစ်၊ ဟိုအကြောင်းဖွ ဒီအကြောင်းဖွ ဖွကာလို့တောင် ပြောင်းခေါ်ရမတဲ့… အွန်လိုင်းမှာ အညာခံထိထားဖူးတဲ့သူတွေကလဲ ဘလော့မှာရေးထားတာတွေတော့ ဖတ်လို့ကောင်းပါရဲ့ အပြင်မှာတော့ မတွေ့ရဲပေါင် သရဲရှောင်သလိုဝေးဝေးရှောင်ချင်ပါသတဲ့.. ကဲ..ကဲ..အဲဒီတော့ ဘလော့ဂါတွေဘာတွေလဲ…. ဟုတ်ကဲ့…လူသားတွေပါပဲဗျာ ဘလော့ဂါရပ်ဝန်းဆိုတာလဲ လူ့လောကရပ်ဝန်းနဲ့ သဘာဝ တစ်ထပ်တည်းကျပါတယ်လို့ပဲပြောပါရစေ။ လက်ရှိလူသားဘဝ၊ လူ့ဘောင်လောကမှာလဲ လူမှုရေးလောကနီတိတွေ ကျင့်ဝတ်တွေရှိသလို၊ စိတ်နေသဘောထား အကျင့်စရိုက်အမျိုးမျိုးရှိသလို၊ ဝါသနာအမျိုးမျိုးရှိသလို ဘလော့ဂါရပ်ဝန်းကလူတွေလဲ ထိုနည်းလည်းကောင်းပါလို့ ပြောပါရစေ။ ဥပမာ… ကော်ပီသံစဉ်တွေ ၊ ကော်ပီရိုက်ကိစ္စပြဿနာတွေ ဒါတွေလဲရှိတာကြုံတာပါပဲ အကြွားပိုတာ၊ အပီအပြင်ညာတာ၊ ဖွန်ကြောင်တာ၊ လိမ်စားတာ၊ စိတ်ပုတ်တာ စိတ်ယုတ်တာ၊ သဘောကောင်းတာ၊ စိတ်ရှည်သည်းခံတာ၊ ကူညီတတ်တာ၊ သီချင်းဆိုတာ၊ သီချင်းတွေလက်ဆင့်ကမ်းတာ၊ အစစအရာရာ ကိုယ့်မှာရှိတာလေးတွေ ဝေမျှချင်တာ၊ ကိုယ်သိတာတတ်ထားတာတွေ သင်ကြားပြသပေးတတ်တဲ့ ဝါသနာကြီးတာ၊ အတွေ့အကြုံတွေ လက်ဆင့်ကမ်းတာ၊ အလှူခံတာ..အလှူပေးတာ၊ ခင်တတ်မင်တတ်တာ၊ အို…ပြောမယ်ဆိုရင် အများကြီးပါပဲလေ.. ကိုယ်ဘာသာစဉ်းစားတွေးခေါ် ချိန်ဆကြည့်ပြီး ကိုယ်နဲ့ကိုက်တာ သင့်တော်မယ်ထင်တာ၊ လမ်းကြောင်းမှန်ကို လက်တွေ့အပြင်လောကမှာလိုပဲ ဘလော့တွေရေးတဲ့ ဘလော့ဂါတွေပေါ်မှာ အကောင်းမြင်တွေးပေးဆက်ဆံပေးရင် အားလုံးငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်စရာ လောကသစ်ကြီးတစ်ခု ထပ်ရတာပေါ့နော်။ တကယ်တမ်းကတော့ ဘလော့ဂါတွေရေးနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကနေတဆင့် အများပြည်သူခံစားကြုံတွေ့နေရတဲ့ သဘောထားအမြင်တွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ရတဲ့ ပြတင်းတံခါးတစ်ခုအနေနဲ့ တန်ဖိုးထားဖတ်ရှုနိုင်ရင် အမှန်မြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အမြင်မှန်တဲ့ ပြည်သူ(သတင်းအမှောင်ဖုံးခံထားရတဲ့သူတွေထဲမှာမပါသူ) တစ်ယောက်လို့တောင် ဂုဏ်ယူလို့ရမှာပါ။ (နိုင်ငံရေးသဘောနဲ့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလေ) အဓိကဆိုလိုချင်တာ တောင်းဆိုမေတ္တာရပ်ခံချင်တာကတော့… ဘလော့တစ်ခုချင်းစီရဲ့ ဘလော့ဂါတွေရဲ့ သူတို့ သန်ရာသန်ရာ ဖေါ်ပြရေးသားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကနေတဆင့် (လိမ်ညာရေးသားနေသူတွေပါကောင်းပါရင် ဥာဏ်လေးနဲ့ဖယ်ထားပြီးမှ) နည်းပညာ၊ အနုပညာ(ကဗျာ၊ ဝတ္ထု၊ ဆောင်းပါး၊ ဓာတ်ပုံ)၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘာအမျိုးအစား ဘယ်လိုဆိုတာ ကိုယ်ကြိုက်ရာသာခွဲပြီး ဖတ်လို့ရတဲ့ ဘလော့လေးတွေကို ဝါသနာပါရာ ရွေးဖတ်ပြီး cbox တို့ comment တို့နဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရိုးရိုးသားသား အပြန်အလှန် ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုရယူရင်း ဘလော့ဂါတွေလဲအပြင်လူသားတွေလိုပါပဲလို့ခံစားနားလည်ပေးပါ။ ဒီဘလော့ဂါတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါမှာလဲ အပြင်လူတွေလိုပဲ လူမှုရေးနီတိတွေနဲ့ သူအားသလား ကိုယ်အားသလား၊ ထမင်းစားနေသလား၊ အလုပ်ရှုပ်နေသလား၊ စိတ်ကြည်လားစိတ်ရှုပ်လား ကာလဒေသအခြေအနေအချိန်အခါလေးတွေလိုက်ပြီး နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။ အပြင်လောကမှာ ည ၁၂နာရီဖုန်းခေါ်ပြီး ကိုယ်မေးချင်တာမေးလို့ ကိုယ့်မိတ်ဆွေစိတ်ဆိုးတာမျိုးကျ ကိုယ်မှားသွားတာ ခွင့်လွှတ်နားလည်မိသလိုမျိုး ဘလော့ဂါတွေလဲ ည၁၂နာရီကျ အိပ်ချင်တတ်တာ အပြင်လူထက် စိတ်ရှည်သည်းခံပေးနိုင်မှုမရှိတာမျိုးကျလဲ ဘလော့ဂါဖြစ်လို့သာ မာနကြီးတာ ပဲများတာ ဘဝင်ကိုင်တာမဟုတ်ရကြောင်း ထပ်တူခံစားပေးဖို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်လေ။ Netizens and bloggers are real people, too. ဟုတ်ပါတယ်..ကျမတို့မှာလဲ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ်၊ ကိုယ်ဂရုစိုက်ရမဲ့သူတွေ မိသားစုတွေနဲ့ မအားလပ်တာတွေလဲရှိတာပေါ့ စိတ်ကြည်တာ၊ မကြည်တာ ဒေါသပြန်ထွက်တတ်တာတွေလဲရှိပါတယ်။ ဘလော့ဂါတွေသည်လည်း အဖျော်ဖြေခံများမဟုတ်ကြသလို ကိလေသာကုန်ခမ်းနေတဲ့ ရသေ့ရဟန်းများမဟုတ်ကြလို့ ဘလော့ဂါ မျက်မုန်းကျိုးသမားများအား ဤပို့စ်ဖြင့် ဂါရဝ ပြုလိုက်ပါကြောင်း….စာကြွင်း၊ ။တိုက်ဆိုင်သူများ ခွင့်မလွှတ်နိုင်လျှင် ခွေးသာလွှတ်ကြပါကုန်..ရည်ရွယ်ရင်းကတော့ ဘလော့ဂါတွေကို အပြင်သာမန်လူသားတွေပါလားလို့ ထပ်ထူနားလည်ပြီး တန်းတူခံစားဆက်ဆံပေးရင်း ပျော်ရွှင်ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးလေးရသွားစေချင်တာပါ။ ဒါပေသိ အရေးမတတ်တော့ဆဲသလို ဖြစ်သွားမစိုးလို့ပါလေ။ Gepostet von
ကျမ စင်ကာပူကိုရောက်နေတာ ဒီလဆို ၈လလောက်ရှိပီ။အလုပ်လုပ်နေတာတော့ ၅လလောက်ရှိပီပေါ့ ဘာဖြစ်လို့ဆို အလည်လွန်(အလေလိုက်) သုံးလလောက် အချိန်ဖြုန်းလိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေသိ တကယ့်တကယ်က စင်ကာပူမှာ အလုပ်တစ်ခုရဖို့ဆိုတာ ပုံမှန် စီးပွားကောင်းချိန် ခေတ်ကောင်းချိန်မှာတောင် ၅ပါတ်လောက် အချိန်ယူရတယ် အချိန်ကြာလေ့ရှိတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်(အရင်ရောက်နေတဲ့ အစ်ကိုတော် အစ်မတော်တွေကပေါ့)။ ကျမ ရောက်တဲ့အချိန်ကတော့ အလုပ်ကလဲ အရင်နှစ်တွေကထက် ပိုရှားပါးပါတယ်။ အင်တာဗျူး အခု နှစ်ဆယ်ကျော်လောက်သွားပီးမှ ရမဲ့အလုပ်ကျ ရှောရှောရှုရှု second interview တောင်မသွားရပဲ ပါ့စ်လျှောက်ပေးတာလဲ နှစ်ရက်တစ်ပိုင်းတောင် မကြာလိုက်ပဲ အင်မတန်အဆင်ပြေသွားခဲ့တာပါ။ အလုပ်ကလဲ မရတော့လဲမရတာ သုံးလလောက်ကြာ။ ရပြန်တော့လဲ ၄ခု ၅ခု ပုံနေလို့ပဲ။ ကံကောင်းခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်က မေးတောင် ကွဲယူတဲ့အထိပါပဲ။ ထားပါတော့ အဲဒါတွေက ပီးခဲ့တာ ဆက်စပ်မိလို့ပြန်ပြောဖြစ်ရုံပါ။အခု global recession ကြောင့် စင်ကာပူမှာ နှစ်သိန်းကျော် သုံးသိန်းနီးပါး အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အပြင် ဒီရက်ပိုင်းမှာဆို contract သက်တမ်းမတိုးတော့ပဲ အလုပ်ရှာတာအချိန်မမီလို့ပြန်ရတဲ့သူတွေလဲရှိနေတယ်။ လာတဲ့သူတွေလဲလာနေကြဆဲ တဖွဲဖွဲပါပဲ။ တချို့ကလဲ လာရကောင်းမလား မလာရကောင်းမလားပဲ လာလာမေးနေကြတယ်။ ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပဲ လာနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ မတားဖြစ်ပဲ လာတုန်းလေး ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ပေးတာကလွဲရင် ပြန်သွားတော့လဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ခံစားချက်တောင် မပေါ်တော့ပါဘူး။ အရေထူသွားသလားလဲမသိဘူးလေ။ အလုပ်ရတဲ့သူတွေလဲ ရနေတာပါပဲ။ အဲတော့ ကိုယ်အတိုင်းအတာနဲ့ကိုယ် အချိန်တွေ ငွေတွေ ရင်းနှီးနိုင်မယ်ဆို ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ကြဖို့ပဲ အဓိက တိုက်တွန်းပါရစေ။ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှန်မှန်မှားမှား တင်ကြိုစဉ်းစားနိုင်ဖို့အတွက်တော့ ကျမဖတ်မိတဲ့ သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ဘာသာပြန်ပြီး ဒိပို့စ်လေးမှာ ထည့်ရေးပေးလိုက်တယ်နော်။ အားလုံး အစစအရာရာ အဆင်ပြေစေချင်ပါ၏။တကမ္ဘာလုံးရဲ့ ၈၅နိုင်ငံလောက်ကနေ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်အကိုင်လာရှာသူ ၁၀ယောက်မှာ ၈ယောက်ဟာ ခုဆိုရင် စင်ကာပူမှာ အလုပ်အကိုင်ရဖို့ အနဲဆုံးလေးလခန့်အချိန်ပေးရပါမယ်လို့ ခန့်မှန်းပါတယ်။ အလုပ်ရှိရာကနေ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်လဲ အကျုံးဝင်ပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ၁၀ယောက်မှာ လေးယောက်က ၇လကနေ အဲဒီထက် ပိုကြာနိုင်ပါသေးတယ်တဲ့။ အဲဒီခန့်မှန်းချက်ကတော့ Korn/Ferry Institute က သုတေသန အဖွဲ့ကနေ အလုပ်လက်မဲ့ ၁၀၀၀ ပေါ်မှာ မကြာသေးခင်ကပဲ ကောက်ခံရရှိတဲ့ စစ်တမ်းပေါ်က အချက်ကို အခြေခံပါတယ်တဲ့။ ဒီလိုစီးပွားရေးကျတဲ့ အချိန်နဲ့ အခြေအနေပေါ်မှာတော့ ကျွမ်းကျင်သူ အဆင့်ရဲ့ ၄၃ရာနှုံးက စစ်တမ်းကအဆိုကတော့ တစ်ခုခု သင်ကြားရေးပေါ်မှာ ဆွဲဆောင်စေချင်ပါတယ်တဲ့။ အလုပ်လက်မဲ့ executives တွေအနေနဲ့ကတော့ MBA သို့မဟုတ် တခြား အဆင့်မြင့် ဒီဂရီ လိုမျိုး ပညာရေးအခွင့်အလမ်းတွေကို မျက်စပစ်နေကြပါတယ်တဲ့။ စစ်တမ်းမှာ တွေ့ရှိရသေးတဲ့ နောက်အချက်ကတော့ အလုပ်ရှာဖွေသူ ၅၅ရာနှုံးက အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသစ်တွေ ရှာဖွေခြင်းအတွက်ပဲ သူတို့အချိန်တွေကို အများဆုံးအသုံးချပါသတဲ့။ လေးပုံတစ်ပုံကတော့ သူတို့ရဲ့ အချိန်တွေကို သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျွမ်းကျင်မှုပိုမိုတိုးတက်စေဖို့ အဓိက အာရုံစိုက်ပါတယ်။ ဆယ်ပုံတစ်ပုံကတော့(၁၀ရာနှုံးပေါ့နော်) မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အားလပ်ရက် အပန်းဖြေထွက်တဲ့ အချိန်တွေအနေနဲ့ အသုံးချကြပါသတဲ့။ အဲဒီသတင်းလေးကို By Satish Cheney, Channel NewsAsia | Posted: 11 March 2009 1933 hrs မှာ ဖတ်မိပါတယ်။ အလည်တစ်လနဲ့လာ ပီအာရ် အမျိုးတစ်ယောက်ယောက်ကောင်းမှုနဲ့ သုံးလလောက် နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာသက်တမ်းတိုးလို့လဲရတယ် သို့မဟုတ် ကျောင်းအပ်ဖို့ ကျောင်းလခ ရင်းနိုင်တယ် အနဲဆုံး ၆လလောက် student pass ကိုင်ပြီး အလုပ်ရှာမယ်။ နေစရိတ်၊ စားစရိတ် တစ်လကို ခြွေတာသုံးလို့ ၆၀၀လောက် အနဲဆုံး အိုကေတယ်။ အလုပ်ရမဲ့ ကံဇာတာနဲ့ ရတဲ့အလုပ်ကို ကျားကုတ်ကျားခဲ ကြိုးစားလုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းအတွေ့အကြုံတွေ တကယ်ရှိမရှိ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ မညှာမတာချင့်ချိန်ဝေဖန်ကြပေတော့ သူငယ်ချင်းမောင်နှမအပေါင်းတို့ရေ... ကျမတို့ရုံးက မြန်မာသူငယ်ချင်းတွေထဲကနှစ်ယောက်လဲ တစ်ယောက်က ကွန်ထရိုက်သက်တမ်းထပ်မတိုးပဲဖြစ်သွားလို့ အလုပ်သစ်ရှာကတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ အပန်းဖြေရင်း အလုပ်နားထားလေရဲ့။ ကျမတို့ အေးဂျင့်ကတော့ ကျမတို့ ၁၆ယောက်ဝန်ထမ်းကို ဘယ်လိုစီစဉ်ပေးလိမ့်ဦးမယ်မသိ... အော်..ဆင့်ကာပူ..ဆင့်ကာပူ...ပါတ်စပို့ သက်တမ်းတိုးဖို့လဲပူ...ပူ..ပူ..ပူ... Gepostet von
အဲဒီတစ်နေ့မှာ...ကန်ပေါ်ကလရိပ်ဖြာနေဆဲငါလဲ နင့်ကိုတမ်းတတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပါပဲ..ကောင်းကင်က ကြည်လင်...ကြယ်တွေစုံတဲ့ညတစ်ညလှလဲလှ သာလဲသာယာငါကတော့ တစ်ယောက်တည်းပါ..မထင်မှတ်တဲ့ အချိန်တခဏရင်မှာ အမှတ်တယ ဆုတောင်းခွင့်လေးကြုံလိုက်ရတာ...ကြယ်ကြွေတာကို အကြိုက်ဆုံးပဲအလျင်အမြန် ငါဆုတောင်းမြဲစကားလေးတစ်ခွန်း ငါ့နှုတ်ဖျားပေါ်ကထွက်ကျ"မင်းနဲ့ တွေ့ပါရစေ"ဒီခဏမှာ ငါလေ ပျော်ခဲ့ရ...everything is okeverything is all right with you I always wish you all the bestOh, my dear lovely star ...please fulfill my wish at sooner!စာကြွင်း။ ။ မွေးနေ့မရောက်ခင်တစ်ည အမှတ်တယပါလေ... (နောက်နှစ်မွေးနေ့မှာ အနားကနေ တကယ် wish လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆုတောင်းလေးပြည့်လို့ပေါ့) Gepostet von
Just Sharing! http://theinngu.org/ (သဲအင်းဂူဆရာတော်)http://www.mahasi.org.mm/ (မဟာစည်-၁)http://www.mahasi.org/ (မဟာစည်-၂)http://www.dhammaceti.org/home.htm (ဘုန်းဘုန်းကောသလ္လ)http://dhammaduta.net/ (အရှင်ပညိဿရ-ဓမ္မဒူတ)http://www.shweparami.net/ (အရှင်ဆန္ဒာဓိက)http://www.yawainwe.net/ (အရှင်ရာဇိန္ဒ)(ရဝေနွယ်-အင်းမ)http://mettashin.com/ (အရှင်ဇ၀န)(မေတ္တာရှင်-ရွှေပြည်သာ-၁)http://mettashin.dhammathukha.com/index.php?option=com_content&view=frontpage(အရှင်ဇ၀န)(မေတ္တာရှင်-ရွှေပြည်သာ-၂)http://www.shwehinthar.com/buddhism/ (ရွှေဟင်္သာဆရာတော်)http://www.sitagu.org/home/ (သီတဂူဆရာတော်)http://www.pilotsayadaw.net/ (အရှင်ဇေယျပဏ္ဍိတ-ပိုင်းလော့ဆရာတော်)http://www.chanmyay.org/ (ချမ်းမြေ့ဆရာတော်)http://majjhimagonyi.info/ (အရှင်ကောဝိဒ-မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်)http://www.paauktawya.org/ (ဖားအောက်တောရဆရာတော်)http://www.phyusayadaw.com/ (ဖြူးဆရာတော်)http://www.theravada-3p.org/ (ဆရာဦးမြင့်လွင်-သန့်တည်ပွား)http://www.mogokinsightny.org/ (မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး)http://realenlightenment.org/ (အရှင်ဥတ္တမသာရ)http://www.lknt.org/ (အရှင်လောကနာထ)http://lknt115.blogspot.com/ (အရှင်လောကနာထ)http://kathitwinemyanmar.blogspot.com/ (ကသစ်ဝိုင်ဝိပဿနာ ဓမ္မရိပ်သာ)http://www.dhammaduta.co.cc/ (အရှင်ဆေကိန္ဒ-ဓမ္မဒူတ) http://majjhimagonyi.info/ (အရှင်ကောဝိဒ-မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်)http://www.paauktawya.org/ (ဖားအောက်တောရဆရာတော်)http://www.phyusayadaw.com/ (ဖြူးဆရာတော်)http://www.theravada-3p.org/ (ဆရာဦးမြင့်လွင်-သန့်တည်ပွား)http://www.mogokinsightny.org/ (မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး)http://realenlightenment.org/ (အရှင်ဥတ္တမသာရ)http://www.lknt.org/ (အရှင်လောကနာထ)http://lknt115.blogspot.com/ (အရှင်လောကနာထ)http://kathitwinemyanmar.blogspot.com/ (ကသစ်ဝိုင်ဝိပဿနာ ဓမ္မရိပ်သာ)http://www.dhammaduta.co.cc/ (အရှင်ဆေကိန္ဒ-ဓမ္မဒူတ) အလှူတကာအလှူတွင်တရားအလှူသည်အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏ ဤဆိုက်လေးများဖြန့်ဝေပေးချင်းဖြင့် တရားအလှူပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ Gepostet von